Read Long no fampiharana Google manampy ny ankizy hahay hamaky | Androidsis
Read Long no fampiharana Google manampy ny ankizy hahay hamaky
daniplay | | Fampiharana Android
Ny fanidiana ny sekoly noho ny fanairana noho ny coronavirus dia nahatonga ny ankizy maro hianatra an-trano. Ny ankizy kely dia manao izany miaraka amin'ny ray aman-dreniny, izay mpanohana be ao anatin'ireny efa ho roa volana nigadrana ireny ary mampiasa fitaovana samihafa amin'ny fianarany.
Google izao dia mandefa rindranasa amin'ny Android natao hanampiana ny ankizy kely hahay hamaky, amin'ny Espaniôla ary mifanerasera. Ny fitaovana dia natao ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona, azo zahana ary manana asa maro handrosoana isan'andro.
Bolo, araka ny nanombohana azy tany India, dia mandray ny dingana ankehitriny amin'ny anarana hoe Vakio miaraka any amin'ny firenena isan-karazany, anisan'izany i Espana, ankoatry ny fiteny hafa misy: Espaniôla, Anglisy, Portigey, Bengali, Urdu, Telugu, Marathi ary Tamil. Manomboka amin'ny teny anglisy izy io, saingy azo atao ny manamboatra azy ao amin'ny menio fikirakirana.
Raha vantany vao nosokafana ny fampiharana dia hanana zazavavy virtoaly isika izay hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fampiasana ny fanekena ny feo, hamantatra raha mamaky ny teny marina rehetra ilay zaza. Raha tsy afaka milaza izany tsara ilay zaza dia hanitsy azy ny mpanampy ary hanampy azy hanonona teny na ilay fehezanteny iray manontolo.
Google dia nanolotra tantara maro, nefa koa misy karazana lalao litera sy teny isan-karazany izay hiova rehefa mandroso ny lesona. Raha vantany vao nahavita ny tantara ny ankizy dia hahazo isa ary hahazo valisoa samihafa, izay azo zahana amin'ny tabilao "valisoa", eo akaikin'ny "Library".
Azo alaina amin'ny fidirana aloha
Miditra amin'ny fidirana voalohany ny fampiharana Google Read along, eo an-dàlam-pamolavolana ary hihatsara amin'ny fotoana fampidirana fanovana isam-bolana. Maimaimpoana ny fampiharana ary efa misy amin'ny rohy farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Read Long no fampiharana Google manampy ny ankizy hahay hamaky
Google Duo dia hanitatra ny fetran'ny mpandray anjara hatramin'ny olona 32